Jurgen Klopp Oo Saluug Ka Muujiyay Saamiga Ay Kooxdiisa Liverpool Ka Heshay Shaxda Kooxda Sanadka Ee Premier League Iyo Falcelintii Uu Ka Sameeyay. - Gool24.Net
Kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay shaxda kooxda sanadka ee Premier league ugu fiican, Jurgen Klopp ayaa ka falceliyay in kooxdiisa Liverpool ay afar ciyaartoy ka heshay wuxuuna saluugay saamiga ay Reds ka heshay shaxda kooxda sanadka ee horyaalka Premier league ugu fiican.
Jurgen Klopp ayaa ku dooday in aragtidiisa ay kooxdiisa Liverpool tahay kooxdii xili ciyaareedka ugu fiicnayd wuxuuna sheegay in ilaa todoba ciyaartoy oo Reds ahi ay u qalmeen in ay shaxda kooxda sanadka ee Premier league ugu fiican ka soo muuqdaan.
Liverpool ayaa shaxda kooxda sanadka ee Premier League ugu fiican waxaa ugu soo baxay afarta xidig ee kala ah Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson iyo Sadio Mane laakiin waxaa laga dhex waayay Mohamed Salah, Gini Wijnaldum iyo Alisson Becker oo ka mid ahaa xidigihii xili ciyaareedkan Reds bandhiga wayn ku soo sameeyay.
Jurgen Klopp oo ka hadlaya afarta ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool ee shaxda kooxda Premier league ugu fiican ayaa yidhi: “Waa wax farxad leh, si fiican ayay ugu qalmaan. Aniga ahaan kooxdaydu sidoo kale waa kooxdii xili ciyaareedka. Aniga fikradayda waxaa ku jiri karay, afar, shan, lix ama todoba ciyaartoy oo dheeraad ah inta ku lug leh”.
Jurgen Klopp ayaa aaminsan in ciyaartoyda kooxdiisu ay dhamaantood soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ahaa balse ay xidigaha Premier league shaxdan cod ku soo doorteen wuxuuna yidhi: “Dhamaantood xili ciyaareed cajiib ah ayay soo qaateen, laakiin ciyaartoyda Premier league ayaa go’aanka sameeyay”.
Klopp ayaa amaanay difaacyada kooxdiisa ee saddexda ah kuwaas oo ku soo wada baxay shaxda kooxda sanadka wuxuuna yidhi: “Waxaa xataa khaas sii ah marka aad kooxda xili ciyaareedka ugu soo baxdo ka difaac ahaan, sababtoo ah waa ciyaartoyda kaa hor yimid ee in ay kaa horyimaadeen aan raaxo ku dareemin. Way fiican tahay, way u qalmaan, laakiin Mohamed ayaa markale u qalmay, waxa uu halkaas la joogaa gool dhaliyaasha ugu sareeya”.
Klopp oo ka hadlaya xidigo kale oo kooxdiisa ah ayaa yidhi: “Gini (Wijnaldum) waxa uu ciyaaray xili ciyaareed layaableh, haddii ay maanta codayn lahaayeen, Hendo (Jordan Henderson) ayaa ugu dhawaan ku jiri lahaa. Waa go’aanka ciyaartoyda, waxaa waajib nagu ah in aanu aqbalno. Aad ayaanu ugu faraxsanahay iyaga”.
Liverpool ayaa isku diyaarinaysa kulanka Jimcaha ee Huddersfield Town wuxuuna Klopp xaqiijiyay in Mohamed Salah uu kulankan diyaar u yaha kadib safarikii uu Maraykanka ku tagay.